Sọpụrụ 10i: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Ọnọdụ Honor 10 bụ otu n'ime ewu ewu na ngwa ndị China, yana ọtụtụ ụdị na ya, dị ka 10 Lite, nke amalitelarị iwu na Spain. Dị ahụ na-ahapụ anyị ụdị ọhụrụ na ya. Ọ bụ ihe gbasara Honor 10i, smartphone ọhụrụ maka etiti a nke akara ndị China. Ekwentị nke etinyegoro anya nke ukwuu na eserese.
Enweelarị nsọpụrụ nke 10i a na ihe omume na China. Yabụ anyị enwetela nkọwa zuru oke nke ekwentị ọhụrụ a site na ika. Ihe nlere anya nke na-ekwe nkwa inwe ezigbo nsonaazụ n'etiti ndị na-eto eto na-eto eto, n'ihi igwefoto ya.
N'ime izu ndị a, enweela ụfọdụ nsogbu banyere ngwaọrụ a. Yabụ na anyị nwere ike ị nwetaworị echiche nke nkọwa ya. Emechara ya ka egosiri ya na eze. N'ihe nhazi, enweghi otutu mgbanwe ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ nke etiti ugbu a, ya na ihuenyo nwere ọkwa n'ụdị mmiri mmiri.
1 Nkọwa Honor 10i
Nkọwa Honor 10i
Nke a na-asọpụrụ 10i bụ ihe nlereanya anyị nwere ike ịhụ n'ime etiti oke. Ọ na-eji ojiji nke Huawei processor a nso, nke bụ Kirin 710. Dị ka anyị kwurula, ese foto bụ otu n'ime isi ihe dị na ekwentị a. Anyị nwere igwefoto azụ atọ na ya, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6,21-inch IPS LCD na mkpebi 2340 x 1080 pixel na 19,5: 9 ruru
Nhazi: Huawei Kirin 710
Rear igwefoto: 24 MP nwere oghere f / 1.8 + 8 MP nwere oghere f / 2.4 + 2 MP nwere oghere f / 2.4
Igwefoto n'ihu: 32 MP
Njikọ: LTE Cat 4, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, microUSB, Radio FM
ndị ọzọ: Rear akara mkpisiaka agụ, GPU Turbo 2.0, NFC, Kpọghe ihu
N'izugbe, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ihe nlereanya na-ahapụ ezigbo mmetụta maka usoro a. Ọ nwere ezigbo nkọwa zuru ezu, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka ndị ọrụ na-achọ ihe dị n'etiti etiti. Karịsịa ma ọ bụrụ na igwefoto bụ ihe na-amasị ọtụtụ na ekwentị. Anyị nwere igwefoto nwere okpukpu atọ na Honor 10i a, na mgbakwunye na 32 MP n'ihu otu. N'ime ha niile anyị na-ahụ ọgụgụ isi, dị ka ha kwadoro site na ụlọ ọrụ ahụ.
Ike bu ihe kachasi mkpa na ekwentị. A na-eji Kirin 710 eme ihe, nke bụ otu n'ime ihe kachasị nke dị na ụdị nke China. Na mgbakwunye, n'akụkụ ya anyị na-ahụ teknụzụ GPU Turbo 2.0. Ya mere ya ime ihe kwesịrị karịa ziri ezi mgbe niile. Anyị nwere njikọta pụrụ iche nke RAM na nchekwa na nke a. Dị ka sistemụ arụmọrụ, ọ na-abịa na ụmụ amaala ya na gam akporo.
Anyị nwere ike ịhụ na na Honor 10i anyị hụrụ ọtụtụ atụmatụ dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ. N'otu aka, anyị nwere ma mkpisiaka mmetụta na ihu unlock kpọghee ekwt na ekwentị. Ya mere enwere ike iji sistemụ abụọ mee ihe oge niile. Na mgbakwunye, NFC abanyela na ya, nke na-eme ka ojiji nke ịkwụ ụgwọ ekwentị. Nke na-eme ka ọ dịtụ zuru ezu na nke a.
N'oge a bụ ihe anyị na-enweghị akụkọ banyere ya. A hụla ekwentị na weebụsaịtị ụlọ ọrụ Russia. Mana o nwebeghị ihe ekwuru maka ụbọchị wepụtara ya. Ọ bụ ihe na-ekwesịghị iwe ogologo oge iji bụrụ onye ọchịchị. Ọ bụ ezie na anyị ga-echere ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ịhapụ anyị data ndị ọzọ. Anyị amaghịkwa ihe ọ bụla gbasara ọnụahịa ahụ.
A na-atụ anya na a ga-enwe ọtụtụ agba nke Honor 10i a. Ndị ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti ojii, pink na acha anụnụ anụnụ, ha niile nwere mmetụta gradient a ma ama nke ika ahụ mere ejiji n'afọ gara aga. Anyị na-atụ anya ịnụkwu banyere ntọhapụ ya n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Honor 10i: Ugwu ohuru ohuru di ugbu a
Oge nke Akụkọ Mgbe Ochie, MMORPG ọhụrụ maka ndị ahụ na-enweghị uche maka World of Warcraft